Lego Star Wars: အနှစ် 20 ၏အမှတ်တရများ Star Wars ချီကာဂိုပွဲ
31 / 12 / 2019 06 / 01 / 2020 ဂရေဟမ် 1467 Views စာ0မှတ်ချက် Lego ၏နှစ်ပေါင်း 20 Star Wars, AFOL, နေပြည်တော်, ပရိတ်သတ်တွေ, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars 20 နှစ်များ, Lego Star Wars: Freemaker Adventures ကို, Rancho Obi-Wan, Star Wars, Star Wars ချီကာဂိုပွဲ, စတိဗ် Sansweet, ဗီဒီယို, YouTube ကို
အဘို့ဤ 20 နှစ်မြောက်နှစ်တွင်တက်ခြုံရန် Lego Star Wars, Brick Fanatics ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု၏အမှတ်တရများအတွက်ပရိသတ်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောမျက်နှာများကိုမေးသည်
ယခုနှစ်သည်ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကြာမြင့်ခဲ့သည် Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်, ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်စင်ရ Lego အကွာအဝေးနှင့်နှစ်ပေါင်း 20 အဘို့မပြတ်မတောက် run ခဲ့ကြသောတစ် ဦး တည်း။ Brick Fanatics မေးမြန်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်မှခေါင်း Star Wars သူတို့အတွက်ပရိတ်သတ်တွေ Lego လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ မှအမှတ်တရများ - Star Wars ချီကာဂိုပွဲ။ အနည်းငယ်သောအကျွမ်းတဝင်ရှိသောမျက်နှာများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်ရစရာများကိုမျှဝေရန်ပင်တက်သည်။
စဉ်အတွင်း Star Wars ချီကာဂိုပွဲ, Brick Fanatics partအနှစ် 20 အပြည့်အဝကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့ panel မှာ icipated Lego Star Wars.
Leland Chee, Lucasfilm မှ Story Group မှအကြီးတန်းတီထွင်မှုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် Holocron ၏ထိန်းသိမ်းသူဒစ်ဂျစ်တယ်သွားသည့်အုတ်များကိုဤသို့ပြန်ပြောပြသည် - Lego Star Wars ဗွီဒီယိုဂိမ်း။ ဒါဟာတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လို့ဒီဂိမ်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်သိပ်မများခဲ့ဘူး။ ကလေးကစားနည်းများသည်သင်အရွယ်ရောက်သူများအဖြစ်သင်ကစားမည့်ဂိမ်းများမဟုတ်ပါ။ ဤဂိမ်းသည်လူကြီးများကိုချစ်နိုင်သည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကလေးငယ်တစ် ဦး ချစ်နိုင်ပြီးပိုအရေးကြီးသည်မှာသူတို့ကလေးများနှင့်ကစားနိုင်သည့်မိဘများအတွက်ဖြစ်သည်။
Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှုသည်ယခုအခါရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ဖြစ်သည်။
Lego Star Wars အစုံ ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego ငါးခု Ideas 2020 အဘို့အအနားယူအစုံ
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ် →